Ogaden News Agency (ONA) – Faahfaahin dheeraad ah arimaha Axmadnoor iyo warar kale oo muhiim ah – Noora Afgaab
Faahfaahin dheeraad ah arimaha Axmadnoor iyo warar kale oo muhiim ah – Noora Afgaab
Sirdoonka Itobiya ayaa maalin hore qabtay nin la yidhaahdo Axmadnuur iyo koox boolis ah oo ninkaas Addis ababa kasoo afduubay kadib markuu Cabdi iley usoo diray.
Ninkan ayaa ah dadka ku kacsan Cabdi iley ee Addisababa fadhiistay ee uuna si toos ah Cabdi iley wax ugu qaadikarin.
Cabdi iley ayaa inbadan isku dayey in uu ninkan iyo Axmadsheekh marka soo afduubo Addis ababa oo uu Jigjiga la yimaado, maadaama Itobiya ay hadda noqotay waddan ay kala haystaan Janana Tigree ah oon dawladda dhexe uga amar qaadanin mid walba gobolka uu haysto. Cabdi iley oo jeneraal Abraha walde u shaqeeya ayaa wuxuu keensado Jigjiga aan looga daba iman karin.
Hadaba maalin dhaweyd ayey ninkan Axmadnuur la yidhaahdo qabteen koox booliska kililka kamid ah oo xabashi ubadan oo ninkaas loo diray. Kadibna sirdoonka Itobiya ayaa u fadhiistay magaalada Awash waxayna dib ugu celiyeenAddis ababa. Kooxdan booliska ah ayaa hadada kuxidh xidhan jeel ku yaalaAddis ababahalkaas oo suaalo lagu waaydiinayo ku saabsan cida soo diray. Cabdi iley ayaa marar badan oo hore dad kasoo afduubay caasimada Addis ababa.
Sirdoonka Itobiya oo inbadan ku taamayey in aay arimahaas cadeyn uhelaan ayaa arintan cadeyn ay u tahay bahalnimada Cabdi iley iyo in leeysla wada arko.
Waxaa xusuus mudan in ninkan uu walaalkii ku jiro jeel ogaadeen kadib markii loo xidhay si uu isagu u yimaado Jigjiga.
Xogtan oo midii hore sii faahfaahinaysa ka dib;
Sida aad lasocotaan Cabdi iley wuxuu kursigan ku heley oo kaliya balan qaad uu u Itobiya u balqaaday in uu ficil ku muujinayo dhawr qodob.
1- Guud ahaan in uu ciidanka Itobiya uga naxariis daranaado dadka degaankakanshacabka ah iyokandagaalamaya intaba
2. Inuu dadka ka dhigo in xabad lagu dilo, in xadhig iyo gaajo lagudilo, in baxsata iyo in foorarta oo sacabka u tunta.
3. Indilka, dhaca iyo waxyaabaha layskula yaabo ay noqdaan mid lagu tartamo.
Hadaba sida calaamada u ah gumeeysi walba siyaasada ugu danbeeysa ee uu Jeneral Abraham siiyey Cabdi iley markay Itobiya lafteedu ka caajistay dhibaatada faraha badan in uu kaladilo qabiilka ogaadeenka islamarkaasna uu colaad kala dhex dhigo isagoo adeegsanaya lacag farabadan.
Hadaba waxaad mooda in aay taasi wadanka gudihiisa ka socon weyday, marka wuxuu mudadan waday in uu u adeegsado dad calooshooda u shaqeystayaal ah kuwo halkan laga diray iyo kuwo horey ugu sugnaa Kenya. Dadkan ayaa waxay fuliyaan operation dhinac dhan ka ah dawlada Kenya, dhinacna cuqdad iyo shaki lagu kala dhex dhigayo dadka Ogaadeenka ah, waxaana qorsheysan in habeenba nin Ogaadeen ah lagudilo Kenyataas oo baryahanba socotay. HADABA WAXAA MUHIIM AH IN SIDAAS
LOOLA SOCDO ARIMAHAAS OO LEYSKAJIRO MAALMAHA U HADHAY NINKA FIDNADA WADA ee hada targetka kadhigtay in uu colaad dadka ku kala dhex beero.